Caddeyn "xad-dhaaf" ah oo loo helay mooshinka xil ka qaadista Trump - BBC News Somali
Caddeyn "xad-dhaaf" ah oo loo helay mooshinka xil ka qaadista Trump
Image caption Donald Trump wuxuu baaritaanka ku tilmaamay ugaarsi xun
Caddeynta loo helay xil ka qaadista Donald Trump ee ah in uu awoodda xafiiska si xun u adeegsaday, waa mid "xad-dhaaf ah", sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen guddiga baaritanka ku sameynaya madaxweynaha Mareykanka.
Madaxweynaha wuxuu adeegsaday siyaasad ku saleysan dano shakhsiyadeed "oo aan ahayn danaha qaranka Mareykanka", ayaa lagu xusay warbixin muhiim ah oo loo diray Aqalka Wakiillada Mareykanka.
Wuxuu sidaas sameeyay isagoo "faragelin dibadeed ka dalbaday" Ukraine, si ay uga caawiso in dib loo doorto 2020-ka, ayaa ku xusan qoraalka.
Ujeedada warbixinta waxay tahay in xafiiska laga saaro madaxweyne Donald Trump.
Wuxuu Trump beeniyay in uu qalad sameeyay, wuxuuna baaritaanka ku tilmaamay ugaarsi xun oo isaga ka dhan ah.
Ka hor inta aanan la shaacin warbixinta qabyada ah, Madaxweynaha oo ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga wuxuu weeraray Dimuquraadiyiinta hor-kacaya baaritaanka oo uu ku tilmaamay "kuwo aan wadaniyiin ahayn".
Ka dib markii la daabacay qoraalka caddeynta ah, Afhayeenka Aqalka Cad, Stephanie Grisham, wuxuu yiri Dimuquraadiyiinta "waxay gebi ahaanba ku fashilmeen soo bandhigidda cadeyn muujineysa in qalad la sameeyay" iyo in warbixinta "ay muujineyso jahwareerka iyaga haysta oo keli ah".
Warbixinta waxaa hadda loo gudbinayaa Guddiga cadaaladda ee Aqalka Wakiillada kuwaas oo Arbacada billaabi doona hannaanka, waxayna eegayaan in mooshin dhab ah oo xil ka qaadis ah oo ka dhan ah Trump ay soo bandhigaan.
Maxaa ku qoran warbixinta?
Warbixinta ka dhalatay baaritaan lagu sameeyay xiriirka Trump iyo Ukraine waxaa dadweynaha loo soo bandhigay Talaadadii, kaas oo ay diyaariyeen Guddi uu Congress-ka soo xulay.
Waxaa lagu sheegay "in la caddeeyay in iskudeyga bilaha qaatay ee uu sameeyay madaxweynah Trump isagoo adeegsanayay awoodda xafiiskiisa oo uu ku dalbaday faragelin dibadda ah oo la xiriiray doorashada 2020-ka".
"Barnaamijka madaxweyne Trump wuxuu ahaa mid aan waafaqsanayn shuruucda arrimaha dibadda ee ku wajahan Ukraine, wuxuuna liiday Amnigeena qaran isagoo dalbaday in eex loo sameeyo oo la billaabo baaritaan ku saleysan dano siyaasadeed oo ka caawiya in dib loo doorto doorashada soo socota," ayaa lagu sheegay warbixinta.
"Trump wuxuu dalbaday in madaxweynaha cusub ee loo doortay Ukraine, Volodymyr Zelensky, uu si shaac ah u sheego baaritaan lagu sameynayo siyaasiga ay Trump ishayaan, madaxweyne ku xigeenkii hore, Joe Biden, iyo in meesha laga saaro in Ruushka uu farageliyay doorashadii 2016-kii, balse ay Ukraine ahayd."
Caddeynta dhaqan xumada waa mid xad-dhaaf ah "iyo sidoo kale in caddeynta ah in uu isku deyay in uu is hortaago Congress-ka."
Faafaahinta cusub ee la helay
Waxaa suuragal ah in la yab ay ku noqoto qof kasta oo dhageystay haddalladii ugu dambeeyay ee dheeraa, kuwaas oo aan u diyaarsanayn Adam Schiff, ee uu jeediyay xilligii dhageysiga uruurinta cadeymaha mooshink ka dhanka ah Trump, laba isbuuc ka hor, in hadda qoraalka kooban oo horudhaca ah uu guuddiga uu soo saaro, Talaadadii. In kastoo lagu dhex milay caddeynta, warbixin 300 oo bog ka kooban, haddana waxaa ka buuxa faafaahinno cusub.
Image caption Guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Congress-ka Adam Schiff (bidix) iyo Guddoomiyaha Aqalka Nancy Pelosi
Shirkadda isgaarsiinta ee AT&T, taas oo baarayaasha Rudy Giuliani, ayaa siisay macluumaadka telefoonnada la duubay, waxay muujiyeen arrimo cusub oo la xiriira wakhtiga iyo baaxadda wadahadalkii qareenka gaarka ah ee Trump uu la yeeshay Aqalka Cad.
Tani iyo bishii April ee sannadkan, Giuliani wuxuu la xiriiray tiro telefoonno ah oo Aqalka Cad ah, gaar ahaan, xafiiska mamulka iyo miisaaniyadda - laanta dowladda ee lehayd go'ankii ugu dambeeya ee hakinta gargaarka militari ee Ukraine uu u ansixiyay Congress-ka.
Inkastoo aan la ogeyn faafahinta wixii lagu wadahadlay, haddana jiritaankaas wuxuu muujinayaa isfaham la'anta ka dhex jirta qaar ka mid ah kuwa dowladda difaacaya ee uu Giuliani uu si gaar ah oo madaxbannaan ula shaqeynayay masuuliyiintaas sare.
Dhowr qof oo goobjoogayaal ahaa, sida safiirka Mareykanka ee EU Gordan Sondland, waxay ku marqaati fureen in Giuliani uu hagayay masuuliyiintaas, xilligii amarka madaxweynaha ee cadaadinta Ukraine taas oo siyaasad ahaan faa'iido u ahaan lahayd Mr Trump.
Hadda qadkii xiriirka Giuliani iyo Aqalka Cad wuxuu noqday mid cad oo muuqda.
Dhegeysiga xil ka qaadista Trump oo toddobaadka dambe bilaabmeysa